आश्विन १३, २०७६ सोमबार
चाडपर्व सुरु भएसँगै दैनिक खाद्यान्न सामानसहित अन्य सामग्रीको बजारभाउ अचाक्ली बढेको गुनासो उपभोक्ताबाट सुनिन थालेको छ । सामानमा कालो बजारी बढिरहेको टिप्पणी पनि छ । सरकारका प्रतिनिधिले नियमित अनुगमन गरिरहेको बताइरहेका छन् । कैयौँलाई कारबाही पनि गरेको देखिन्छ । बजारभाउ बढ्दा सरकार मात्र दोषी हो कि उपभोक्ता स्वयं नि ? यसका समाधानका उपाय के के हुन सक्छन् ? यस विषयमा संवाद गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. योगेन्द्र गौचन, नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ तथा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनालाई आमन्त्रित गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उहाँहरूसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश–